Egypta: Sary Famantarana Manokana Google Ho An’ny Andron’ny Zaza Kamboty · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Aogositra 2017 6:42 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, عربي, Italiano, English
(Marihina fa tamin'ny 25 Martsa 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Zaza kamboty Egyptiana mihoatra ny 160 no nandray anjara tamin'ny fifaninanana Google doodle (sary kisoratsoratra), izay sambany natao tao Egypta sy tany Afovoany Atsinanana. Hiseho eo amin'ny pejy fandraisana Google Egypta (google.com.eg) ny 3 Aprily, amin'ny Andron'ny Zaza Kamboty any Egypta, ny sary nandresy. Ny Zoma voalohany amin'ny volana Aprily no andro ankalazana izany isan-taona.
Tato anatin'ny taona maromaro, nampiseho fahalianana bebe kokoa ho an'i Afovoany Atsinanana i Google , nanomboka tamin'ny fanokafana ny biraony tany Afovoany Atsinanana, any Egypta izany tamin'ny taona 2006. Manampy izany ny famoahan'ny Google vao haingana ny bilaogy vaovao amin'ny teny Arabo.
Hoy i Teedoz raha nanambara ilay fifaninanana tao amin'ny bilaoginy [ar]:
Miezaka ny haneho fahalianany amin'ny firenena isankarazany i Google amin'ny alalan'ny fihaonana sy fanentanana mba hisarihana ny saina momba ny zava-mitranga ao an-toerana. Ny manova ny sary famantarana Google eo amin'ny pejy fandraisana no iray amin'ireo paikadiny, izay antsoin'ny orinasa hoe Doodle (sary kisoratsoratra). Koa satria manakaiky ny Andron'ny zaza kamboty, ny 20 Martsa, dia nanomboka fifaninanana vaovao i Google izay ahitana ireo kamboty miisa roanjato mandray anjara amin'ny sary hatao sary famantarana Google vaovao ho an'i Egypta mba hanehoana ny maha Egypta azy sy ny dikany hoe Egyptianina.
Namoaka mailaka izay nalefan'ny “Ambasadaoron'ny mpianatra Google” ho azy ireo tany amin'ny Oniversiten'i Alexandria i Mohammadkotb sy Ahmed Hamdy, ao amin'ny Amr Ebaid ny fampahafantarana bebe kokoa momba izany.
Tamin'ny 20 Martsa, nikarakara ny voalohany tamin'ny “Sary kisoratsoratra hanaovana Fifaninanana Google” any Afovoany Atsinanana i Google. Nanasa zaza kamboty maherin'ny 160 izahay avy amin'ny trano fitaizana zaza kamboty isankarazany ao Egypta tao amin'ny biraon'ny Google nandritra ny tontolo andro. Nanao ny sary kisoratsoratra MAHAVARIANA ireo ankizy, izay nihoatra lavitra noho ny niheveranay azy. Tena nahafinaritra ny tontolo andro , ary ny nahita ireo ankizy nahazo fahafinaretana no tena zava-dehibe!
Nanatrika ny hetsika i Khaled AbulNaga, ny kintan'ny sarimihetsika Egyptiana, ary tena nanohina azy ireo ankizy, ka nanapa-kevitra izy ny hanohana ara-bola ny iray tamin'izy ireo mandra-pahatapitry ny taom-pianarana kolejy!
Nanoritsoritra ny Sary kisoratsoratra nankafiziny sy nofidiny antserasera i MohammadKotb raha naneho hevitra tao anatin'ity mailaka ity :
Rehefa avy namaky ny mailaka aho, dia nandeha nijery ireo Sary kisoratsoratra ary tena nahita sary kisoratsoratra tsara tarehy nataon'ny ankizy kely Egyptiana, tena mahay izy ireo, ary tena tiako ny Sary kisoratsoratra miisa roa. Tena tsotra ny voalohany , ary nataoko teo am-piandohan'ny lahatsorako, ilay tanora antsoina hoe Gaber Seror 15 taona no nanao azy, ary izay no Sary kisoratsoratra nosafidiako. Ary ny faharoa kosa dia ity: zaza 11 taona Ahmad Taha no nanao azy, ary ny zavatra tena tiako indrindra tao amin'ity Sary kisoratsoratra ity dia ny “Edret el fool”, satria tiako loatra ny tsaramaso fotsy!
Ny “Google Sary kisoratsoratra” iray nataon'i Ahmed Taha, 11 taona
Nandrisika ireo mpisera aterineto mba hifidy ny Sary kisoratsoratra izay ho voafidy [ho an'i Egypta] i Noblese , mba handrisihana ireo tanora Egyptiana manan-talenta:
Ary amin'izao fotoana izao, tianay hahafantatra izao tontolo izao fa tena manan-talenta ny ankizy Egyptiana … tianay ny hizara ity rohy ity amin'ny olon-drehetra, ary mangataka ny rehetra mba hifidy izay ho mpandresy Sary kisoratsoratra Google. Misokatra mandra-pahatapitry ny volana Martsa ny fifidianana, ka noho izany, FIDIO ankehitriny ary ilazao ihany koa ny namanao.
FIDIO ETO: http://www.google.com.eg/myegypt
MIANGAVY ANAO MBA HILAZA IZANY AMIN'NY NAMANAO … Porofoy amin'ireo ankizy fa tsara ny sarin'izy ireo.